Fazul Abdalla oo la la diley - BBC News Somali
Fazul Abdalla oo la la diley
12 Juunyo 2011
Lahaanshaha sawirka bbc
Image caption Fazul Abdalla Mhamed
Maraykanku waxay sheegeen inay jiraan sababo adag oo lagu rumaysan karo in uu dhintay Fazul Abdalla Mohamed oo ahaa hoggaamiyihii al-Qaeda ee Afrikada Bari. Waxana waraka laga soo xigtey magaalada Muqdish ay sheegayaan inuu ku dhintay taxshiirado la is weydaarsaday habeennimada Salasaasadii, isgoyska ex-Kontorool ee Koonfurta Muqdishu.
Wasiirka warfaafinta ee DKMG ee Somalia, Abdiariim Jaamac, waxa uu isna BBC-da u sheegay in baadhitaan DNA ah oo lagu sameeyey meydkii salaasadii lagu diley koonfurta Muqdishu, i lagu xaqiijiyey inuu ahaa Fazul Abdalla Mohamed
Xoghaya arrimaha debadda ee Maraykanka, Hilary Clinton, waxay ku tilmaantay wararka ka hadlaya dhimashaa Fazul Abdalla dhirbaaxo kale oo weyn oo ku dhacda al-Qaeda.
Fazul Abdalla Mohaed, waxa loo haystey oo la rumaysa yahay inuu ka mid ahaa raggii hoggaaminayey ee ka danbeeyey qaraxyadii safaaradaha Maraykanka ee Tanzania iyo Kenya ee 1998 oo ay ku dhinteen dad ilaa 200 oo qof gaadhaya, waxana lagu raadinayey madax furasho ilaa 5 milyan oo dollar ah ciddii soo sheegta amma keenta ee soo qabata.
Hase ahaatee ururka al-Shabaab oo BBC du la xidhiidhay waxay sheegeen in wararkaasi aanay ahayn qaar wax ka jiraan. Dhinaca kalena, saraakiisha ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta ee Muqdishu waxay iyaguna sheegeen in aanay xaqiijin karin wararka dhimashada ninkaasi iyo waxa lagu aqoosan karo, iyo in aanay is lahayn oo aanayna si buuxda iskugu wada ekayn muqaal meydkii la keenay iyo sawirradii hore ee laga hayey ninkaasi Fazul Abdalla.
Ma aha markii ugu horraysay ee la sheego in la diley ninkaasi. Sanaddii 2007 ayaa mar la sheegay in isaga iyo rag kale oo al_Qaeda ahaa lagu laayey Somalia. Hasse ahaatee haatan waa muuqata in si weyn loo rumaysan yahay in Fazul bdalla lagu diley magaalada Muqdishu habeennimadii Salaasadii ee toddobaadkii hore.